Ny Fisaraham-Panambadiana Ao Rosia - Teny Rosiana Bilaogy - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Ny Fisaraham-Panambadiana Ao Rosia - Teny Rosiana Bilaogy
ny fanambadiana tamin'ny taona, nisy
Ny ankamaroan'ny olon-dehibe mponina amin'ny firenena rehetra, fara fahakeliny, roa ny zavatra iombonana: ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana
Na dia tsy izany no malaza ny lohahevitra, na dia izany aza ny ampahany manan-danja ny kolontsaina rosiana.
Amin'izao fotoana izao isika dia mampitaha ny ny tahan'ny fisaraham-panambadiana eo amin'ny Rosia sy Etazonia ity. Masìna ianao, ataovy ao an-tsaina fa ity no tsy ao anatin'ny ezaka ataony mba hanaporofoana fa iray amin'ireo firenena manome voninahitra ny fanambadiana kokoa noho ny hafa izy, saingy fotsiny izy mba hanome ny sasany zava-misy manodidina ny fampitahana ny amiko. Koa, misy foana mifanohitra amin'ny angon-drakitra araka izay azo ka tsy mandray ireo isa ireo araka ny"filazantsara"fa hijery ny tahirin-kevitra toy ny famantarana sy fitaovana ho an'ny fampitahana. Website nanome antontan'isa ho an'ny rosiana ny ampahany amin'ity bilaogy ity. Araka ny toerana, Rosia dia bebe kokoa ny fisaraham-panambadiana noho ny firenena hafa. Raha ny tena izy, isaky ny.
Midika izany fa mikasika ny isan-jaton'ny fanambadiana hiafara amin'ny fisaraham-panambadiana.
Ny antony nahatonga ny fisarahana am-panambadiana ihany koa ny laharana faha mba tena manan-danja: ny fanitsakitsaham-bady, ny fahantrana fitantanam-bola ny, fa tsy ny marimaritra iraisana, ary ny fisotroan-toaka fidorohana zava-mahadomelina. Raha ny antontan'isa ireo dia somary nanaitra ny tenany, aoka hojerentsika ny fomba izy ireo ampitahao amin'ny United States. Website nanome ny fisaraham-panambadiana ny antontan'isa ho amin'ny United States. toa misy ny fahatakarana fa ny tahan'ny fisaraham-panambadiana dia ny isan-jato - aho dia nandre vitsivitsy vazivazy momba izany. Raha ny marina, ny tahan'ny fisaraham-panambadiana izay tsy mbola nisy fa efa ho avo hatramin'ny rehefa izany dia ny isan-jato. Raha ny marina, ny isan'olona ny tahan'ny fisaraham-panambadiana antontan'isa amin'ny - voalaza fa momba ny isan-jaton'ny fanambadiana hiafara amin'ny fisaraham-panambadiana. Ny tahan'ny fisaraham-panambadiana isaky ny arivo amin'ny fitambaran'ny mponina dia. Ao Rosia io taha isan-arivo nandritra ny taona io ihany no. Araka ny fanadihadiana nataon'ny-Pirenena ny maha-Ray Institute ary navoaka tao amin'ny tranonkala ity, ny mitarika ny antony mahatonga ny fisaraham-panambadiana ao amin'ny U. dia toy izao manaraka izao: ny tsy fisian'ny fifandraisana, ny fitantanam-bola, ny fihetseham-po dia voatery, ny fitokisana, sy ny zavatra andrasana avy amin'ny hafa. Hametraka roa ireo ny firenena, raha oharina amin'ny hafa voatanisa an-tampon'ny firenena noho ny fisaraham-panambadiana tamin'ny. Ny firenena amin'ny avo indrindra ny tahan'ny fisaraham-panambadiana dia toy izao manaraka izao, miaraka amin'ny ny fisaraham-panambadiana ny tahan'ny isan- amin'ny fitambaran'ny mponina: Mongolia nanana.
fisaraham-panambadiana isaky ny arivo mponina ao
ny tahan'ny raha Danemark, Soisa, Espana, Australia, sy Japana, ireo rehetra nanana ny isa latsaky ny.
Ny antony nahatonga ny fisaraham-panambadiana dia efa ho toy ny maro toy ny vola ny tranonkala izay manome tahirin-kevitra mikasika ny foto-kevitra. Eto dia ny takeaways avy rehetra izany: tsy mitsaha-Mitombo ao tokana-ray aman-dreny an-trano dia mampitombo ny fahafahana izay ihany koa aho nisara-bady. Manana ny zaza dia mampitombo ny fahafahana izay aho hijanona miaraka amin'ny vady. Ny zava-misy fa ny vady efa teo aloha manambady mampitombo ny vintana fa dia ho fisaraham-panambadiana amiko. Ahoana no izany rehetra izany dia midika? Na inona na inona ho ahy. Antontan'isa, na ny marina na ny fijery diso any, milaza"ny zavatra efa"tsy voatery hidika hoe"inona no ho"ihany koa Izy ireo tsy tafiditra ao amin'ny fiainana-manova ny zava-nitranga izay mety hanimba na hanamafy orina ny fanambadiana. Na dia eo aza ny tahan'ny fisaraham-panambadiana dia manodidina ny isan-jato any Rosia, tsy dia, ary tokony tsy manakivy ny olona tsy manambady. Izany tokony mba hahatonga ny olona hitandrina kokoa aza. Tiako mandeha hatreto toy ny milaza fa raha miditra an-fanambadiana ny toe-tsaina fa tsy misy afa-tsy vintana ianao ianao hijanona miaraka, ianao hahazo izay mangataka. Teraka tany Rosia, dia nandany ny voalohany roa-polo taona maro ny fiainana ao Orenburg, Rosia sy Mogilev, Belarosia. Nandritra ny iraika ambin'ny folo taona, efa nipetraka tany New Hampshire sy Michigan, ETAZONIA. Raha mbola manohy mandray sy mampifanaraka ny Amerikana kolontsaina, foana aho faly mizara ny rosiana lova amin ireo izay mahita azy io ho mahaliana. Travel, sary sy ny kanto mitana ampahany manokana amin'ny fiainako. Mazava ho azy fa raha toy izany ny mpivady mizara ny tsy hita ao amin'ny misy ny fisaraham-panambadiana antontan'isa na dia efa niara-nonina nandritra ny taona maro. Misy mahalala ve raha mpiara-fonenana nefa tsy manambady no mahazatra kokoa ao Rosia na ny USA, sy ny zavatra isan-karazany isa no tafiditra? Misaotra anao noho ny manampy ny lahatsoratra mikasika io lohahevitra io. Dia manampy foana ny hahazo statstics na dia eo aza ny fampitandremana fa mety ho nandavaka sy ny fomba fijery no manampy ihany koa. Izaho dia nihaona tamin'ny vehivavy rosiana, izay voalaza fanekena fanomezana avy nisara-panambadiana, ny vehivavy dia fambara ratsy. Izy no nanao ny vehivavy nisara-panambadiana ho ratsy ny olona.
Izy no tsy manaiky ny zava-misy fa ny ray aman-dreniny dia nisara-panambadiana.
Ity ny ampahany amin'ny teny rosiana ny kolontsaina na mihevitra ve ianao fa ity misy zavatra manokana miaraka aminy.
Zaza nisintona velona avy amin'ny teny rosiana ny firodanan'ny trano - AOL Vaovao
Tasuta advokaat ettepanekud: Leida kohaliku advokaadi ja vestlus online - venemaa seadused